उपेन्द्र यादवले अब के गर्लान् ? – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः ७ मंसिर २०७६, शनिबार ०९:२० November 23, 2019
काठमाडाैँ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोध्दै नसोधी उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा भारत भ्रमणमा रहेका सामाजवादीका अध्यक्ष यादव आक्रोशित हुँदै शुक्तबार फर्किएका छन्।
उनी नआउँदै देशभित्र यो प्रश्न उब्जिएको छ, अब उनी के गर्लान् रु समाजवादीमा यसै विषयमा मतभेद सुरु भइसकेको छ। केही सरकार छाड्नुपर्ने तर्कमा छन् भने कतिपय अझै हेर्नुपर्ने धारमा छन्। समाजवादीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन्।
तर, उपप्रधानमन्त्री यादव निकटले मन्त्रालय हेरफेर हुँदैमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क सही नभएको बताएका छन्। सरकार छोड्ने या के गर्ने ? भन्ने बारेमा पार्टीमा निरन्तर छलफल हुँदै आए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।